Article submitted by: minkyaw thuyein on 15-Nov-2012
သာသနာ သန်.ရှင်း သန်.စင်ရေး
အလို ဟုတ်ပါရဲ. ၊ ဘယ်သူတွေဟာ ဒို.လူကလေး တွေလဲ ၊
(ခိုင်အောင်လုပ်ကြပါ) တဲ့ တယောက်ကဆိုတယ် ၊ ( ပြောပြန်ရင်လဲ အောင်မင်းလွန်ရာ ကျမယ် ) လို.ဘဲပြောရင်း စလိုက်ကြစို.။
တပေါင်တွေ နှပေါင်တွေက အတော်ကို စိတ်ဝင်စားဘို.ကောင်းတယ် ၊ တပေါင်ဘဲပေါ်ပေါ် နှစ်ပေါင်ဘဲပေါ်ပေါ် လုံအောင် မထိုင်နိုင် ကြလို. ပေါ်တယ် ဆိုရင် မှားမလား ?
(စိန်ဖူး မြေခ) ဆိုတာက ဘယ်တုန်းက တပေါင်လဲ စိန်လွင် ကြွသွားတာ
တော့ကြာပါပြီ ၊ နေ ၀င်သွားတာလဲကြာပြီ၊ တညင်ကကြက်ဖ လဲ တောကိုဝင်သွား ပြီးပြီ ၊ ဟင်းအိုးထဲ လဲ မရောက်သေးဘူး မျိုးလဲပြန် မရသေးဘူး ၊ အခု စိန်ဖူး မြေခ ရင် ကြောင်လို ကျရင်ကျ ခွေးလိုကျရင် အတော်နာ
မယ် ၊ မထင်နဲ့နော် အသက်ပါ ပါသွားနိုင်တယ် ၊ တပေါင်တွေကကောင်း
တဲ့ အရိတ်နိမိတ်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး (ဘုရားပြီး ငြမ်းဖျက်မှ သင့်မယ်) တဲ့ ဓမ္မတာ ဘဲ၊
ငလျှင်တွေ လှုပ်တယ်ဆိုတော့ မှန်အောင်လဲ ဟောပါ ၊အပြည့်အစုံလေး
သာ ဟောပါ ဆရာရယ် လို. တောင်းပန် ရမလား ဘဲ ၊ ယတြာကဘာလဲ ။ စိန်ဖူးကတော မြေခတော့မှာ မကြာတော့ဘူး ၊ ဘာရက် အို ဘားမား မှ မကယ်ရင် သေဖွယ်ရာ ဘဲရှိတော့တယ် ဆိုရင်ရောမှန်မလား ။ ဒါကြောင့် အို ဘားမား မြန်ပြည်ဆီ သုတ်ခြေတင်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊၊
(ပြည်တော် ပြန် မယ်ဒွေးလေး မင်းဖြစ်မှ အေး ) ဆိုတာကလဲ ရှိသေး
တယ် ၊ ကြားဘူးမှာပေါ့ ။ ဘယ်လိုသဘောရသ လဲ ၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ မင်းတပါး ဖြစ်နေပြီလေ ၊ မြန်ပြည်မှာလဲ အေးသင့်သလောက် အေးနေ
ပြည်ကြီးက အတည်ကြီးတွေ အလုပ်များနေကြတယ် ။
တရုတ်ပင်လယ်ထဲက ကျွန်းတွေကို သူပှိုင်တယ် ငါပိုင်တယ် ဆိုပြီး ဂျပန်နဲ့ ငြင်းနေတာကြားရတောယ ဒို.တတွေနဲ. အင်္ဂလိပ်ကြား အရေး
အခင်းဖြစ်ရတဲ့ ရှင်မဖြူ (ရှောင်ပူရီ) ကျွန်းကိူ သွားသတိရတယ် ။
ပေါက်ဖေါ်တွေ သူတို.အိမ် သူတို.ယာတွေ နေသားတကျ စီစဉ်ချထား
ပြီးရင် ဇါတ်ပွဲ ကတော့ဆက် က လိမ့်အုံးမယ်လို. ယုံကြည်ရတယ် ။ တရုတ် ဇါတ်ပွဲဟာ နာမည်ကြီးတယ် ၊ သူတို.လဲ ၁၀ နှစ်တခါ ဆိုသလို ဇါတ်ဆောင် လဲပြီး အိုဗါဟော(လ်) လုပ်သန်.စင်နေကြတယ် ။ ပြီးရင် ဘေး ပါတ် ၀န်းကျင်ကို ဆက်ပြီး သန်.ရှင်းရေး လုပ်မှ သူတို.အိမ်ထဲ ခြံထဲကို သူများရဲ့ အမှိူက်သရိုက် ဖုံ ဖွဲ သလဲ တွေ အ၀င်နဲလိမ့်မယ် ။ ကြောက်စရာ တော့ မရှိပါဘူး သတိဆိုတာ ရှိအပ်တယ် ။ တရုတ်နိုင်ငံ
ဟာ လူဦးရေ အထူးများပြားတယ်ဆိုသလောက် မြေလွတ်
တွေ လဲ ပေါကြွယ်ဝလျှက်ပဲ ။
ဒို.ဆီမှာ သန်.စင်စရာတွေကများတော့ သန်.စင်လိုက်ရင် ဘာမှ မကြန်
အောင် ဖြစ်သွားမယ် ၊ ရှင်ကြီး ကျားထက်ဆိုး သတဲ့ ။
သာသနာသန်.စင်ရေး ဆိုတာက စရရင်တော့ ၊ ဘာသာ သာသနာ
ဆိုတာ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဟောတယ် ။ ဟောရမဲ့ သူတွေ ကိုယ်တိုင် က်ိုယ်ကျင့်တရားတွေ စောင့်ထိမ်း ခိုင်လုံ သန်.ရှင်းဘို.လိုတယ် ၊ ရှေးတုန်းကဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာ အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်သူဟာမင်းကျင့်တရား ၁၀ ပါးနဲ့ ပြည့်စုံရတယ် ၊ သင့်တော်သူကို သာသနာပိုင်ခန်.တိုင်ပင်ညှိနှိုင်း
ဆွေးနွေးပြီး သာသနာ သန်.ရှင်းရေးကို တာဝန်တရပ်အနေနဲ့လိုအပ်သလို
ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်တယ် ၊
မြန်မာနိုင်ငံလို ဘာသာစုံ သာသနာစုံ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေရှိသလို ။ သူ.တိူဘာသာမှ သူတို. ဆိုပြီး တခြားဘာသာ အ၀င်မခံတဲ့ နိုင်ငံတွေလဲ ရှိနေတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ.မြင်နေရတယ် ။ ဒို.နိုင်ငံ ဒို.ဘာသာ ဒို.သာသနာလို. ဆိုတော့ ဒို.ကို လူနဲစုတွေက အကြောင်းရှာရန်လုပ်ကြ
အားမနာတန်းပြောရရင် သူတို.က သူတို. ပထွေးတွေ အားကိုးနဲ့ တမျိုး ဒို.ကိူယ်တိုင်ရဲ. မေတ္တာ ဂရုဏာ မုဒိတ္တာဆိုတာတွေကို ပျော့ကွက် အနေနဲ.အခွင့်ကောင်းယူ အနိုင် ကျင့် ကြတာ ကိုခံနေရတာများလာတော့ အခုပေါက်ကွဲ ကုန်တာဘဲ ရခိုင် ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေ အခုမှဘဲ သိကြတော့ သတဲ့ လား ၊ ရခိုင်မှာ မွတ်စလင်တွေ သူတိုဘာသာ သာသနာကို သူတို.သန်.ရှင်းရေး လုပ်တာ ရခိုင် ဗုဒ္ဒဘာသာ ၀င်တွေ မတော်နာတယ် ။ ဗုဒ္ဒဘာသာ သာသနာကို သန်းရှင်းအောင် ဘယ်သူက တာဝန်
(ဘုရားသားတော် စစ်စစ်) လို.ပြောလာရင် (စစ်စစ် )ဆိုတာ ရာဟုလာ တယောက်ဘဲရှိတယ်ဆိုတာ ကြားဘူးပါတယ် ၊ သင်္ဃာန်းဝတ်တိုင်းဟာ ဘုရားသားတော် လို.ဆိုနေတာ ခရစ်ယန် ဆန်လွန်းနေတယ် လို.မြင်တယ်(ဘုရားသားတော်) ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာစကားကို ဂေါတမ
ကိုယ်တိုင်ဟောတာလား ၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ရှင်မောဂလန်တို. က ပြန်ဟောတာ လား ၊ တခြားသော ရဟန္တာသူမြတ် သံဃာတွေက ဟောတာလား ၊ လူတွေကဘဲ ပြောကြတာလား ။
စစ်မှန်တယ် မစစ်မှန်ဘူးဆိုတာကို ဘယ်လို စစ်ဆေးခွဲခြမ်းမလဲ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စာရင်းအရ ၈ သိန်းရှိပြီး စာရင်းမ၀င် မှတ်ပုံ မတင်တဲ့ သင်္ဃန်းဝတ် ဘယ်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး ၊
ရခိုင် ပြည်နယ်အရေးဟာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ၂ မျိုးစလုံးပါတယ် ။ ရခိုင်တွေ နေနိုင်လွန်းတယ် ။ တချိန်က ဆိုရိုး စကား တခုက (ရခိုင်နဲ.မြွေပွေးတွေ.ရင် ရခိုင် ကို အရင်သတ် ၊ မြွေပွေးကို ကိုနောက်မှ သတ်) တဲ့ ၊ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်၊ ရခိုင်တွေဟာ သူတို.ဒေသ သူတို.နယ်မှာ သူတို.အပေါ် မွတ်စလင်ကုလားတွေက လူမျိုးရော ဘာသာပါ လွှမ်းခံရတာ ဟာသူတို.ညံ.လို.ဘဲ ၊ မဟာမြတ်မုနိ ကို ဗမာတွေ ပင့်သွားလို. လို.ဆိုရင် ၊ ပင့်သာမသွားရင် မွတ်စလင်တွေ ဖျက်တာ ခံရဖွယ်ရှိလို.ဘဲလို.ချေပရလိမ့်မယ် ။ ရခိုင်မလေးတွေကို မွတ်စလင်တွေက မုဒိန်းကျင့်တယ်
လို. ပြောပြော နေတာတွေ မကြာခဏ ကြားရတတ်တယ် ၊ အလိုတူ အလိုပါ တွေ မိဘပေးစားတာတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် နဲ.ရခိုင် လူ.ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ယောကျား ရှားနေလို. ရခိုင်
မလေးတွေ မယားငယ်ခံ နေကြတာလား ၊
ကိုယ်.လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာ ကို ကိုယ်မြတ်နိုးရင်ကိုယ်ဘာလုပ်ရမလဲ
ဆိုတာ ကိုယ် သိရမယ် ၊ ပြောစရာတွေကတော့ အများကြီးဘဲ ။ မသိတဲ့လူတွေကို ပြောနေလို.လဲ အပိုဘဲ ။ မတတ်နဲ.ဘူတွေကို သင်မပေးနဲ. တတ်သွားရင် ကိုယ်ကို တောင် ရန်လုပ်လာလိမ့်အုံးမယ် ။
ဒီလိုလဲ သဘောထားရမဲ့ပုံ ပေါက်နေပြီ ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရခိုင် ဗုဒ္ဒဘာသာတွေ ရခိုင်ဘုန်းကြီးတွေသင်္ကန်းဝတ်
တွေ အသုံးမကျလို. ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ရိုဟင်ဂျာ ပြည်နယ် အဖြစ်
ခံခြင်ခံကြစေ ၊ ဒါကို နမူနာ သင်္ခဏ်းစာ ယူပြီး တခြား ဗုဒ္ဒဘာသာတွေက မြန်မာတနိင်ငံလုံး အခုဖြစ်စေ နောင်ကို ဖြစ်စေ ဗုဒ္ဒဘာသာ ကွယ် ပျောက်မဲ့ အရေးကိုတော့ အခုထဲက ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရလိမ်.မယ် ။
ဒို.တတွေ ဘယ်ဘာသာကိုမှလဲ မစော်ကား ဘူး ၊ ဒို.ဘာသာကို စော်ကား
ရင်လဲ မခံသင့်ဘူး ။ မေတ္တာ ဂရုဏာ မုဒ္ဒိတာ တွေ ဘေးချိတ်သင့်ရင်
ဒီလိုပြောလို. လူမိုက် မထင်နဲ. တူညီသော ဆန်.ကျင်တုန်ပြန်မှု ဆိုတာ နိယာမ ။
နောက်ကြုံတော့ ဆွေးနွေးကြ အုံးမယ်လေ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ. ။